Ku soo dhawaada Aqalka Golaha shacabka. - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Ku soo dhawaada Aqalka Golaha shacabka.
August 14, 2017 August 14, 2017 admin524
Xaruunta Golaha shacabka oo ah halka ay fadhiistaan xildhibaanada qaranka oo ah hayada ugu sareeysa sharci dajinta qaranka.ilinka hore waxaa ku qoran ku soo dhawaada ( welcome). Alabaabkani waxa uu ku soo xasuusinayaa, sawirkii caanka ahaa ,khiyaaligana ahaa ee dhawr qarni ka hor farshaxaniiste Devinji ,uu sawiray Naarta ,kadibna irida uu uga dhajiyay Tabeele weeyn oo ay ku qoran tahay “ kuwa Galayoow isla hilmaama raja kasta oo ah in aad ku dhax badbaadiin” .
( Baarlamaanka muuqaalkiisa iyo xildhibaanadu waa isku eg yihiin. Qofkii musqul ku dhax fekera barambaro ayuu kaaga sheekeeyaa, gurigaas qofkii ku dhax fekerana….) War aqalka aan quruxsano,oo dad aragti qurxoona aan keesano waaye taladeeydu ee xumaan ha u qaadan.
Ciidamo watay gaadiid dagaal oo Degmada Wanlaweyn xalay ku dilay nin Nabadoon ahaa